Iikholeji zeBhayibhile zePentekoste zasimahla ezikwi-Intanethi kufuneka uyazi ngo-9
Nalu uluhlu lweekholeji zebhayibhile zepentekoste ezisimahla kwi-intanethi kwi-intanethi namhlanje ezivulekileyo zokufumana usetyenziso kunye nokuthatha inxaxheba kumaKristu avela kuwo onke amazwe ehlabathi.
Ihlabathi namhlanje lilawulwa ngamaKrestu kunye neeMoslim njengezona nkolo ziphambili zehlabathi nangona zikho ezinye iintlobo zonqulo ezikhoyo.
La mabhunga mabini aphambili enkolo asebenza-ekufundiseni ukunceda ukwakha ukholo lwamakholwa kwaye kunokwenzeka ukuba afundise okanye aguqule ongakholwayo ozimisele ukusondela.
Kweli nqaku, ndiza kube ndibonisa inani leekholeji zebhayibhile zepentekoste zasimahla ezinikezelwe ekufundiseni inkolo yobuKristu kubo bonke nakwezinye izinto kwaye ndinikezela nangezatifikethi zediploma kunye nesidanga malunga noku.
Ngelixa iikholeji ezininzi zeBhayibhile zikwi-intanethi namhlanje, ayizizo zonke iikholeji ezisimahla kwaye ezinye zazo zinxibelelene neecawa ezithile, i-orthodox, charismatic, ipentekoste, okanye iicawa ezithile zenkolo ngaloo ndlela azifundisi ibhayibhile kuphela kodwa zifundisa ezinye iimfundiso abazikholelwayo. kufuneka ifundiswe.
Ngaba ikholeji yebhayibhile isimahla?
Yeyiphi eyona kholeji yebhayibhile ikwi-Intanethi?
Ngaba sikho nasiphi na isikolo sebhayibhile esikwi-intanethi sasimahla eCanada?
IiKholeji zeBhayibhile eziMahala zasimahla ezikwi-Intanethi
IZiko leeNkokeli zamaKristu
IZiko leMfundo leBhayibhile
IZiko leZwi labaProfeti
I-AMES yeSikolo seLizwe saBaphathiswa
UJim Feeney IZiko lePentekoste leBhayibhile
Isikolo seZiqu zintathu seApologetics kunye neTheology
Njengazo zonke iikholeji, iikholeji zebhayibhile akufuneki zikhululeke kodwa zinokukhetha ukuba njalo. Akukho sinyanzelo sokuyalela ikholeji yebhayibhile ukuba inikezele ngezifundo zayo zasimahla okanye zokufumana idiploma kunye nezidanga ngaphandle kokuhlawulwa.
Nangona kunjalo, kukho iikholeji ezininzi zebhayibhile ezibonelela ngemfundo yasimahla kwi-Intanethi kwaye ndizidwelisile apha ukuze ufumane isibonelelo.
Zininzi iikholeji zebhayibhile ezikwi-intanethi kwi-intanethi namhlanje. ezinye zezi kholeji zivunyiwe ngelixa uninzi zingenjalo kodwa bonke benza konke okusemandleni abo ukubonelela ngeemfundiso zebhayibhile ezifanelekileyo ukuze baphucule inkolo yobuKristu babafundi babo.
Njengobunyani obungcono, akukho nkqubo yamkelekileyo esekwe embindini eye yahlela ezi kholeji zebhayibhile ukuba zixelele ukuba yeyiphi eyona ilungileyo kwaye kutheni kodwa kum, ezona kholeji zebhayibhile zibalaseleyo kwi-intanethi namhlanje zezo zivunyiweyo kodwa zinikezela ngezifundo imfundo kunye nezifundo zasimahla zebhayibhile ezikwi-intanethi ezineziqinisekiso zokugqitywa kwazo.
Ewe, kukho izikolo ezininzi zebhayibhile ezikwi-intanethi zasimahla eCanada, kwaye iZiko leeNkokheli zamaKristu sesinye sazo. Ezi zikolo zibonelela ngezifundo ezininzi zebhayibhile zasimahla kwaye ezinye zazo azihlali nje kuphela kubafundi baseCanada kodwa nabanye abafundi abavela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi.
IZiko leeNkokeli zamaKristu yenye yezona kholeji zebhayibhile zepentekoste zisimahla kwi-intanethi kwi-intanethi namhlanje esekwe kumanqanaba okungahleliwe.
Iziko likholelwa ukuba isikolo sabo sebhayibhile siza kunceda amakholwa akhule ngobuchule, ukuzithemba kunye nokuthembeka ukufikelela kwihlabathi ngoYesu Krestu. Ke ngale nto, le kholeji yebhayibhile ibonelela ngezifundo zesikolo zebhayibhile zasimahla ezivuleleke kubo bonke.
Kukho iikhosi zebhayibhile ezahlukeneyo ezilikhulu kwiziko ledatha kwaye isikolo siphumelele ngempumelelo abafundi abaliqela phantse kuwo onke amazwe ehlabathi.
Isikolo siqinisekisa ukuba iikhosi kunye neeklasi zisimahla njengoko bacela inkxaso yemali ngokusebenzisa iminikelo yasimahla yokugcina imisebenzi yabo.
Ukubhalisa ukuze ube yinxalenye yale kholeji yasimahla yebhayibhile, kuya kufuneka ube unayo okanye ubuncinci ukufikelela kwi-intanethi enikwe isixhobo esinjenge-andriod okanye isixhobo se-iOS okanye ilaptop. Ubhaliso kunye nokwenza iakhawunti yomfundi kunyanzelekile kwaye simahla.
Iimfundiso zebhayibhile yenye yeekholeji zebhayibhile zebhayibhile zepentekoste zasimahla ezifumaneka simahla kwi-intanethi namhlanje nangona ezinye zeekhosi zabo zikhululekile, ukufumana idiploma kwiziko ekufuneka uhlawule lona.
IDiploma yeZiseko zeBhayibhile ibonelela ngendlela eyakhekileyo yokufunda iBhayibhile kwinqanaba lesiseko. Ifuna ukuzibophelela kweeveki ezingama-33 ngexabiso le- $ 495 ene-diploma yesatifikethi sokugqibezela ekugqibeleni kwabathathi-nxaxheba abaphumeleleyo.
Isandi selizwi lesiprofeto yikholeji yasimahla yepentekoste yebhayibhile ekwi-intanethi ezinikele ekufundiseni ibhayibhile kunye noqeqesho lwabathathi-nxaxheba kwiminitry isebenza yonke mahala!
Eli ziko likhokelwa nguGqirha Joseph Kostelnik ochaze ukuba waqala ikholeji yasimahla ekwi-intanethi ukuze azalisekise umbono awamnika wona ukuba aqeqeshe amakholwa asisigidi kulungiselelo, oya kuthi asebenzise oko bakufundileyo ukuqeqesha abanye.
Eli ziko lidibene necawa kaGqirha uJoseph kodwa akufuneki ube lilungu lecawa yakhe ukuze uxhamle kwikholeji.
Nabani na onokufikelela kwezi zifundo umntu kufuneka abhalise njengomfundi kwaye abe neakhawunti yomfundi eqongeni.
I-AMES yeSikolo seLizwe saBaphathiswa yikholeji yebhayibhile yasimahla ekwi-intanethi ekwi-intanethi ebisebenza ukusukela ngo-2003 kwaye yaqeqesha amawaka abafundi beBhayibhile kwihlabathi jikelele.
Isikolo sinezifundo ezingaphezu kwe-20 ezahlukeneyo zebhayibhile ezikwi-intanethi ezivulekileyo zabafundi kwihlabathi liphela zonke simahla.
Isikolo se-AMES seSizwe soMphathiswa sithathwa njengenye yeekholeji zebhayibhile ezikwi-intanethi ezikwi-intanethi ezinomthamo womfundi ongaphezulu kwe-80,000 evela kumazwe kwihlabathi liphela.
Nje ukuba wamkelwe esikolweni, ungathatha inxaxheba kwizifundo zabo ezininzi zasimahla ezikwi-intanethi kwaye ufumane izatifikethi ezinokuprintwa ekupheleni kwesifundo ngasinye. Unokwenza umqondiso nje weedola ezingama-20, unokufumana iikhredithi zekholeji ezinokudluliselwa kwaye unokuqhubeka nokufumana isidanga seBible Studies kule kholeji.
IZiko leBhayibhile likaJim Feeney Pentecostal Bible yikholeji ye-penticostal yebhayibhile ekwi-intanethi efundisa ibhayibhile kwiPentekoste-iCarismatic Perspection kwaye iziko lineemfundiso zebhayibhile ezilungele ukufumaneka nabani na naphi na.
Iziko elasekwa ngo-2004 ngu-Pastor Jim Feeney kwaye lihambelana necawa yakhe njengoko iintshumayelo kunye neemfundiso zecawa ziyinxalenye yezifundo kweli qonga.
Ikholeji yeBiblepoint yenye yeekholeji zebhayibhile zepentekoste zasimahla ezikwi-intanethi kwiwebhu namhlanje, ngeenjongo ezizodwa zokufundisa kunye noqeqesho lwabafundi kulungiselelo lwePentekoste ekusasazeni ivangeli yobuKrestu.
Le kholeji yebhayibhile ibonelela ngezifundo zayo zebhayibhile kwiClasscentral iqonga lokufunda kwi-intanethi kwaye ngenxa yezizathu ezaziwayo kubo, okwangoku kukho enye yezifundo zabo kweli qonga okwangoku. Ucinga ukuba le khosi ayihlawulelwa, ijolise ngakumbi ekwakheni amandla okwenza ubunkokeli kunokuba ibe yimfundiso ekhethekileyo yeBhayibhile.
Isikolo seZiqu zintathu seApologetics kunye neTheology sisifundo sasimahla esikwibhayibhile sepentekoste esibonelela ngeenkosi ezininzi kunye neediploma zobugqirha ngemfundo yokufunda simahla.
Isikolo sinee-ebook ezininzi zasimahla kunye nezifundo ezininzi zasimahla kwi-intanethi ezinokuthi zithathwe ngabafundi kulo naliphi na ilizwe ngaphandle kokuya kwenza iakhawunti kunye nesikolo.
UZiqu-zintathu yinto engeyiyo ihlelo, esekwe e-Bhayibhileni, kwipateni yeTestamente eNtsha, kwisemina yebhayibhile apho amaBhaptizi, amaPentekoste, iiCharismatics, okanye amaKrestu ayo nayiphi na inkolo eyamkelekileyo ukuba afake isicelo kwaye afunde, ukuba amkelwe.
Ngelixa izifundo kuZiqu-zintathu zisimahla, kuya kufuneka uhlawule umrhumo wobhaliso lwexesha elinye njengomfundi omtsha.
Ngokokubona kwam, UGrace Christian University sesona sikolo sebhayibhile sikwi-intanethi okwangoku.
UGrace christian yiyunivesithi yamaKrestu epheleleyo enikezela kuzo zombini iikhampasi nakwiidigri ezikwi-intanethi ezisuka kwi-bachelos ukuya kwi-masters ukuya kuthi ga kwinqanaba lobugqirha.
IGrace Christian University ikwayunivesithi yamakristu yamandulo yebhayibhile kunye nekholeji njengoko ibikho ngaphezulu kweminyaka eyi-80 ukusukela oko yaqalayo.
Iseminari yaseNyakatho-ntshona Iziko lebhayibhile elikwi-intanethi elibanga ukuba libonelela ngeyona ndlela ifikelelekayo kunye nexesha elifanelekileyo labaphengululi beBhayibhile ukuze bafumane isidanga se-seminary esisemthethweni kwi-intanethi naphina emhlabeni.
Isikolo sibonelela ngenkqubo yesidanga kunye neyokukhawulezisa isidanga sithatha malunga neentsuku ezingama-90 ukuba zigqitywe.
Ukuthatha kunye nokufumana izatifikethi zasimahla kwi-Intanethi ezivela kwiikholeji zebhayibhile kwihlabathi liphela ayisiyiyo myht. Kungenxa yoko le nto ndithathe ixesha lam lokubeka ezi kholeji zebhayibhile zepentekoste zasimahla ezifumaneka kwi-intanethi namhlanje ecaleni kwezixhobo zonxibelelwano ezahlukeneyo zokukunceda ukufikelela kwezi zikolo ngokulula ukuba uthathe inxaxheba kuyo nayiphi na inkqubo yazo.
Yiba simahla kwiikhosi zebhayibhile ezikwi-intanethi ezinezatifikethi okanye izifundo zesidanga sakwibhayibhile ezinxulumene nesidanga kunye needigri zaseminari; Ungayifumana yonke loo nto idweliswe ngokufanelekileyo kwaye ichazwe kweli nqaku.
Iikhosi zasimahla zasekhompyutheni zaBafundi bamazwe aphesheya
Amanqanaba eMatriki aSimahla kwi-Intanethi yaBafundi bamanye amazwe
Iikhosi zase-Harvard zeYunivesithi zasimahla kwi-Intanethi zaBafundi
Iikhosi zasimahla kwi-Intanethi eCanada zaBafundi beZizwe ngezizwe
Post Previous:I-5 yeeDyunivesithi eziGqwesileyo eAfrika kwezamayeza ngoku
Okulandelayo Post:Isebenza njani iMali-mboleko yabafundi
Biaca Maricel uthi:
February 14, 2022 kwi 6: 52 am
Funda malunga nebhayibhile ekwi-intanethi kunye nediploma ye-acreditta. Ce trebuie să fac ca să ma înscriu?????
USteve Samsons uthi:
February 1, 2022 kwi 5: 41 pm
Lo nguSteve Samsons. NdiyiCEO yeBiblicalTraining.org. Ndifuna nje ukubonisa ingcaciso enye kwizimvo onazo kwiposti yakho malunga ne-BiblicalTrainin.org. Zonke iiklasi kunye neentetho zisimahla; bonke. Ukuba umsebenzisi angathanda isatifikethi kufuneka ahlangabezane neemfuno kwaye ahlawule umrhumo wolawulo. Kodwa yonke imixholo iyafumaneka simahla.
February 7, 2022 kwi 12: 26 pm
Enkosi ngengcaciso uSteve.
Gba Lévi GOMA uthi:
Matshi 11, 2022 kwi-9: 25 pm
Bonjour ! Puissions-nous avoir ces cours en français ? Merci.
Pingback: Izikolo ezili-13 ezikwi-Intanethi ezibonelela ngeMbuyiselo yeetshekhi kunye neeLaptop ezingama-2021
Pingback: Iikholeji zeBhayibhile ezikwi-Intanethi eziPhantsi eziPhambili eziPhantsi ezifumana iiNkcukacha zoKwamkelwa
K. Benarjee Kumar uthi:
Oktobha 2, 2021 kwi-2: 15 pm
Ndifuna ukwenza izifundo zeBhayibhile zasimahla kwi-Intanethi
sadegh nikpour uthi:
Disemba 12, 2021 kwi-6: 27 pm